Ronaldo oo shaaciyay waqtiga uu ka fariisanayo Kubadda Cagta – GEELLE MAG
Cristiano Ronaldo wuxuu muteystay inuu qof walba ka fakiro goorta ay tahay inuu soo idleeyo mustaqbalkiisa, iyadoo super star-ka Juventus uu hoos u dhigay tilmaamo kale oo ku aadan qorshihiisa howlgabnimada waqtigan.
Da’diisa waa 34, ciyaartoy kasta oo kubada cagta caadiga ah waxaa la filayaa inuu ku dhowaado dhamaadka shaqadiisa ciyaareed.
Si kastaba ha ahaatee, Ronaldo ma ahan ciyaaryahan celcelis ahaan kuwaas la mid ah ama ka muuqato waqtigaan, wuxuu qaataa tabar joogta ah oo adag si uu naftiisa kaga yeelo midka dunida ugu fiican.
Ma muujin wax calaamad gaabis ah, wuxuuna hore u soo jeediyay inuu sanado badan ka harsan yahay mustaqbalkiisa, iyadoo ay macquul tahay inuu ku dayan karo Ryan Giggs iyo Paolo Maldini oo ciyaarayay ilaa dhalashadiisii 40-aad.
Xiddiga shanta jeer ku guuleysta Ballon d’Or ayaa ku jira mashruucyo badan oo ka fog garoonka, isagoo leh shirkadaha ugu badan ee sameeya qalabka Internet-ka, waxyaabaha la isku carfiyo ee udgoonka iyo noocyo kala duwan oo cabitaano ah.
Mar uu ka hadlayay dareenkiisa dhanka nolosha ka dib markii uu ka fariisto ciyaaraha, Ronaldo ayaa qirtay inuusan dooneyn inuu noqdo tababare.
Wuxuu u sheegay SPORT bible markii wax laga weydiiyay mustaqbalkiisa “Weli waan jeclahay kubada cagta. Waan jeclahay in aan madadaaliyo taageerayaasha iyo dadka jecel Cristiano. Dhib malahan da’da, waa wax ku saabsan maskaxda”.
“Shantii sano ee ugu dambeysay waxaan bilaabay in aan ku raaxeysto howshan, marka yaa garanaya waxa dhici doona sannadka soo socda?”.
Ronaldo weligiis kama mid aheyn inuu ka xishooda loolanka, wuxuuna qirtay inuu u heellan yahay sidii uu u ilaalin lahaa qiimahiisa ganacsi meel ka baxsan kubada cagta, madaama uu weli sii wado inuu sii ahaado mid weligiis wanaagsan.
Waa in aad noqotaa mid naftiisa mar walba ilaaliya, laakiin marwalba waad soo qaadan kartaa faah faahin yar oo waxaad ka qaadan kartaa waxyaabo tusaale fiican ah, ma ahan kaliya kubada cagta laakiin isboorti kale, sidoo kale – Formula 1, NBA, golf, iyo wax kasta oo ay yihiin ciyaartooyda ugu fiican.
Kubada cagta, waxay leedahay xakameyn dheeri ah. Waan ogahay waxaan sameyn karo. Ganacsiga, way adag tahay, waxaad ku tiirsanaan doontaa dadka kale, laakiin waxaan heystaa koox fiican. Waxay noqon doonaan kuwa xaliya caqabadaha yimaada ee dhanka ganacsiga.
Madaxweynihii hore ee Galmudug oo ka hadlay Isbaheysiga Muqdisho looga dhawaaqay